WAXAAD U BAAHAN YAHAY: Martin Vrijland
Taageeradaada ayaa si deg deg ah loogu baahan yahay si loo sii wado. Markii aad ku biirto bartan waxaad ku taageeri doontaa shaqada Martin Vrijland tabaruc. Haddii aad sidoo kale rabto malaayiin dad ah inay u akhriyaan akhbaarta si ka duwan sanad walba, taageeradaada waa la soo dhaweynayaa. Adiga ayey ku jirtaa intaad rabtid inaad tabarucdid. Ku soo biiristaada waxaad iga caawineysaa inaan noolaado oo aan u wada halgano xorriyaddayada.
Diiwaanka Cusub ee Cusub
Log in in la cusboonaysiiyo ama la bedelo xubinimada hadda jirta.
Dooro heerka xubinnimadaada
Xubinta Bilaha ah - € 2,00 - 1 Bishii
Waxaad xubin noqotaa oo aad ku bixisaa € 2 bishiiba
Iibsashada xubinta bil kasta - € 5,00 - 1 Bishii
Waxaad xubin noqotaa oo aad ku bixisaa € 5 bishiiba
Xubin bil ah bishii - € 10,00 - 1 Bishii
Waxaad xubin noqotaa oo aad ku bixisaa € 10 bishiiba
Bilaha dahabka ee bisha - € 20,00 - 1 Bishii
Waxaad xubin noqotaa oo aad ku bixisaa € 20 bishiiba
Xubin Sanadka - € 25,00 - aan xad lahayn
Waxaad xubin noqotaa oo aad ku bixisaa € 25 sanadkiiba
Qofka iibsanaya sanadka - € 65,00 - aan xad lahayn
Waxaad xubin noqotaa oo aad ku bixisaa € 65 sanadkiiba
Xubin sannadeed oo lacag ah - € 125,00 - aan xad lahayn
Waxaad xubin noqotaa oo aad ku bixisaa € 125 sanadkiiba
Dahabiga dahabka sanadka - € 250,00 - aan xad lahayn
Waxaad xubin noqotaa oo aad ku bixisaa € 250 sanadkiiba
Nambar dhimis	- ansax ah - Aan sax ahayn
Xulo Habka Lacagtaada
PayPal	 Kaarka Amaahda / Debitka	 Ururinta lacag-bixinta (oggolaansho xagga iDEAL)
Anigu waxaan ku raacsanahay siyaasadda asturnaanta
Guud ahaan Wadarta: 1.382.576